एक अर्थोडन्टिस्ट के हो? | गठन र अध्ययन
एक अर्थोडन्टिस्ट के हो?
माइट निक्यूसा | 19/10/2021 23:37 | काम बन्द गर्नुहोस्
एक अर्थोडन्टिस्ट के हो? दन्त स्वास्थ्य हेरचाह एक बानी हो कि बचपन बाट बढावा दिनु पर्छ। दन्त चिकित्सक को यात्रा को एक दिनचर्या हो कि रोकथाम लाई सुदृढ गर्न को लागी एक सम्भावित निदान को लागी प्रारम्भिक भाग लिन को लागी हो। जे होस्, त्यहाँ हेरचाह छ कि एक दन्त सफाई वा भर्न प्रदर्शन बाहिर जान्छ। मुस्कान एक सौंदर्य घटक छ कि छवि संग सम्बन्धित छ। जसरी एक व्यक्ति आफैंलाई बुझ्दछ, कसरी उसले महसुस गर्दछ जब ऊ ऐनामा हेर्छ, यसले उसको आत्म-सम्मानलाई पनि असर गर्छ। र, अर्कोतर्फ, यो पनी तपाइँ कसरी अरु संग सम्बन्धित हुनुहुन्छ प्रभावित गर्दछ।
एक सुन्दर मुस्कान को लागी इच्छा एक उपचार सुरु गर्न को लागी प्रेरणा बढाउन सक्छ कि लक्ष्य को लागी अनुकूल छ। अर्थोडन्टिस्ट उहाँ आज सबैभन्दा मूल्यवान पेशेवरहरु मध्ये एक हुनुहुन्छ। धेरै ग्राहकहरु दन्त चिकित्सा को क्षेत्र मा विशेषज्ञ एक विशेषज्ञ को सेवाहरु को मांग। असुविधा को एक कि एक व्यक्ति एक दिन प्रतिदिन आधार मा अनुभव गर्न सक्छ दाँत को एक अनुचित स्थिति संग सम्बन्धित हुन सक्छ। यो तब हुन्छ जब त्यहाँ कुनै सही अलगाव वा भीड हुन्छ.
1 मुस्कान को सौन्दर्य हेरविचार मा विशेषज्ञ
2 सौंदर्यशास्त्र र कार्यक्षमता एकजुट छन्
मुस्कान को सौन्दर्य हेरविचार मा विशेषज्ञ
Orthodontics को क्षेत्र मा अवस्थित नवीनता प्रत्येक रोगी को लागी अनुकूलित समाधान प्रदान गर्दछ। यस तरीकाले, एक निजीकृत र विशेष प्रक्रिया को माध्यम बाट, व्यक्ति आफ्नो जीवन मा एक मोड्ने बिन्दु अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यस क्षेत्र मा जीत को प्रवृत्तिहरु मध्ये एक अदृश्य orthodontics हो। यो औंल्याउनु पर्छ कि उपचार शुरू गर्ने प्रक्रिया मात्र बचपन मा प्रासंगिक हुन सक्दैन। यो बचपन हुन सक्छ जब विशेषज्ञ हेरचाह हुन्छ।
तर, वर्तमान मा, त्यहाँ पनि धेरै व्यक्तिहरु छन् जो वयस्कता मा एक विशेषज्ञ संग परामर्श गर्ने निर्णय गर्छन्। जे होस्, एक सम्भावित चिन्ता हो कि रोगी अनुभव गर्न सक्छ सौंदर्य कारक हो। यस सन्दर्भमा, यो औंल्याउनु पर्छ कि अदृश्य orthodontics उत्कृष्ट परिणाम प्रदान गर्दछ, र, यसको अलावा, यसको नाम संकेत गर्दछ, यो नग्न आँखा देखिने छैन। यन्त्रहरु को उपयोग गरीयो आफ्नो आवश्यक समारोह पूरा तर आफ्नो अत्यन्त विवेक को लागी बाहिर खडा। उनीहरु पूरै नजरअन्दाज गरीरहेछन्।
दन्त चिकित्सा को क्षेत्र भित्र उपकरणहरु को विभिन्न प्रकार छन्। निश्चित व्यक्तिहरु बाहिर खडा छन्, ती जो एक निश्चित समय को लागी स्थायी रूप बाट गरिन्छ। ती जो हटाउन योग्य छन्, अर्कोतर्फ, मा राख्न र पल को आधारमा बन्द गर्न सकिन्छ। जे होस्, व्यक्ति विशेषज्ञ को निर्देशन को पालन गर्नु पर्छ र यो संकेत घण्टा को समयमा यो लगाउन को लागी यो वांछित प्रभाव को उत्पादन को लागी लगाउनु पर्छ। व्यावसायिक निदान सधैं निजीकृत छ र त्यसैले उपचार छ.
सौंदर्यशास्त्र र कार्यक्षमता एकजुट छन्
दाँत को एक अपर्याप्त स्थिति मात्र सौंदर्य को दृष्टिकोण बाट कथित छैन। यो परिस्थितिले चबाउने को रूप मा एक दैनिक को रूप मा एक कार्य लाई प्रभावित गर्दछ। खाना चपाएर शान्त र सावधानी पाचन सुधार गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। जे होस्, एक सही स्थिति आन्दोलन कि व्यक्ति आफ्नो मुख मा खाना पीस गर्न को लागी परिमार्जन गर्न सक्छ।
तेसैले, एक orthodontic उपचार बाट बाहिर परिवर्तन न केवल सौन्दर्य बृद्धि, तर पनि कार्यक्षमता। र अर्कोतर्फ, सौन्दर्य कारक पनि भावनात्मक क्षेत्र संग सम्बन्धित छ। उदाहरण को लागी, यो आत्म-सम्मान सुधार गर्दछ.
एक orthodontist के हो र किन यो विशेषता रोजगार को एक उच्च स्तर प्रदान गर्दछ? यो सबैभन्दा मूल्यवान पेशाहरु मध्ये एक हो। र, यसैले, यो ती व्यक्तिहरुलाई जो भविष्य मा यस क्षेत्रमा काम गर्न प्रशिक्षण को सपना देख्न को लागी व्यावसायिक विकास को अवसर प्रदान गर्दछ। विशेषज्ञ खाता मा लिन्छ जो रोगी को लागी सबैभन्दा सुविधाजनक उपचार हो, एक कि उनीहरुको आवश्यकताहरु लाई अनुकूलित गर्दछ र त्यो प्रक्रिया को दौरान अधिक आराम प्रदान गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » अध्ययन » काम बन्द गर्नुहोस् » एक अर्थोडन्टिस्ट के हो?
हेमेटोलोजिस्ट के गर्छ?
एक अर्थशास्त्री को रूप मा काम गर्न को लागी पाँच व्यक्तिगत ब्रान्डि tips सुझाव